Blọọgụ Heating | Martech Zone
Izu a bụ izu siri ike. Ọrụ m dị egwu ma enwere m obi ụtọ maka ndị ọgbọ m na ndị ahịa m. Maka oge mbụ, agbanyeghị, ekwenyere m na blọọgụ m metụtara na mmekọrịta mmekọrịta m. Ebe m na ha kwurịtara okwu ogologo oge, ekwetaghị m na enwere m nsogbu ọ bụla na onye were m n'ọrụ. Ndị ndu m kwenyesiri ike na ịde blọgụ dị ka okwu dị mma. N'ezie, ha enweghị ike ibu ọrụ maka okwu m ebe ọ bụ na ha bụ nke m na ọ bụghị nke onye ọzọ. N'ihi nke a, ị ga-achọpụta na enweghịzi m njikọ na onye were m n'ọrụ. Ọ dị oke njọ - ebe ọ bụ na m hụrụ n'anya ịkwalite ha dị ka onye ndu na nchekwa data na ụlọ ahịa ahịa dijitalụ.
Otu onye ahịa bụkwa onye were m n'ọrụ na mbu welitere okwu. Agbanyeghị na anaghị m arụ ọrụ ọ bụla maka ụlọ ọrụ ọ bụla mgbe ha mere ka mmekọrịta ha sie ike… na ahapụghị m otu maka ibe ya, onye ahịa ahụ welitere ajụjụ ụfọdụ gbasara ọrụ m na ọrụ m na mmekọrịta ha na onye m na-arụrụ ọrụ ugbu a.
Ekwenyere m na esemokwu ahụ pụta n'ihi nsonye nke ntinye blog m mere nke ahụ katọrọ ụfọdụ mgbalị ahịa nke onye ọrụ m gara aga. N'ụzọ dị ịtụnanya, na ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ blọgụ m… onye were m n'ọrụ mbụ bụ otu n'ime ha. Enwere m obi ụtọ na m bụ isiokwu nke mkparịta ụka na ụlọ ọrụ niile… ọtụtụ ndị enyi m juputara na m. Okwu m dara ụda nke ukwuu na m kwenyere na ọ sitere na ngalaba m na-arụ ọrụ maka ya, site na ụlọ ọrụ, site na m onye were gi n ugbu a ma laghachikwam! Amaara m na ọ na-abịa ma kwadebe maka ya - mana ọ ka bụ ọnọdụ na-adịghị mma.
Questionjụ ọkwa ọnọdụ dị mma mgbe niile. Mgbe m na-arụrụ ụlọ ọrụ ahụ ọrụ, a bịara mara onyeisi ọrụ nke goro m ọrụ anya maka ụlọ ọrụ ọ bụla ọ na-eduru anyị. Ọ bụ ezie na anyị bụ obere ngalaba, anyị rụrụ ọrụ pụtara ìhè dịka otu otu ma nwee ike ịnapụta - ugboro ugboro. Ndị enyi agwala m na ha ekwenyeghi na otu ọhụrụ ahụ enweela ihe ịga nke ọma anyị nwere. Echere m na ọ bụ ya mere lil ol 'Doug's blog ji bulie elu.
Agaghị m ekwe ka onye ọ bụla nwee ohere igosi blọọgụ m dị ka isi iyi maka ọghọm ma ọ bụ ndahie ha. Ewepụrụ m ihe ndenye m na blog nke mere ka ọ bụrụ nkwanye ùgwù maka onye were m n'ọrụ ugbu a. Aka m na-ejide ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ na ya maka nnukwu nkwanye ùgwù. Ọzọkwa, ndị ọkachamara mụ na ha rụkọrọ ọrụ enweghị nke abụọ. M ka na-eche nke ọma onye ndu goro m ọrụ ma duzie m nke ọma n’ebe ahụ. Na m ọbụna ekele na m na-eduga n'ọnụ ụzọ site ọhụrụ njikwa. Emechakwa, ọpụpụ m na-eduga m na ụlọ ọrụ mara mma, ụlọ ọrụ na ọnọdụ m nwere ugbu a!
Agaghị m ekwu okwu ma ọ bụrụ na enweghị m mmasị. Ọbụna enwere m ngwaahịa ole na ole na ụlọ ọrụ m na-arụrụ ọrụ. Ndi ahia nwere ike ghara ịkatọ ụlọ ọrụ ha nwere?
Forbes nwere ezigbo edemede, Mmegide nke blọọgụ, na-agwa mwakpo nke blọọgụ nke na-emebi aha na ụlọ ọrụ na-emejọ. Ọ na-amasị m na mbipụta ga-eguzogide nnwere onwe ikwu okwu. Ọ bụrụ na ebumnuche nke ntinye blog bụ imerụ ụlọ ọrụ na-eji ụgha ma ọ bụ aghụghọ, mgbe ahụ ekwere m na nke ahụ bụ nkwutọ. Ma ọ bụrụ na ntinye blog bụ nkatọ eziokwu nke ụlọ ọrụ na-aga na-ezighi ezi… Nke ahụ bụ nkwutọ? Echeghị m.
Ekwenyere m na ọ bụ ihu abụọ, enweghị isi, na ịdị mma nke iwu kwadoro 'Free Press' na ụlọ ọrụ a iji luso ịde blọgụ. Gingde blọgụ na-eme ka olu m dị ka nke na-esote ma na-enye m ụzọ iji kwupụta uche m kpamkpam. Cheedị otú ịde blọgụ ga-esi nyere mba anyị aka n'ọgụ maka ikike nha anya nke ụmụ nwanyị na ndị pere mpe! A nụrụ olu ha ma chebe ha n'atụghị ụjọ nke imegide. M na-amalite ikwere na ọ dịghị ihe dị egwu dị ka Rosa Parks dị na Steeti n'izu a.
Ọ gaara amasị m ịgụ blọgụ Nwada Parks!
Tags: Blọọgụblọọgụ kpo okuụlọ ọrụ ịde blọgụblọọgụ ụlọ ọrụForbes